IPredator Triton 300: Ilaptop entsha yokudlala ye-Acer | | Iindaba zeGajethi
IPredator Triton 300: Ilaptop entsha yokudlala yeAcer
U-Eder Esteban | | Iikhompyuter, Iilaptop
I-Acer isishiya neendaba ezingaphezulu kwinkcazo-ntetho yayo kwi-IFA 2019. Inkampani ivelise ilaptop yayo yokudlala, ngaphakathi kosapho lwezixhobo zePredator. Kule meko yiPredator Triton 300, eboniswa njengelaptop enamandla kodwa elula kakhulu yokudlala. Umdibaniso owenza ukuba ulungele xa kufikwa ekuhambiseni nathi kuyo yonke indawo.
Inikwe njengemodeli yokusombulula, eya kuthi isinike ukusebenza okuhle. Kwakhona, ungalibali ukuba i-Acer yenye yeempawu eziphambili kweli candelo lentengiso. Le Predator Triton 300 lukhetho olufanelekileyo ukuthatha ingqalelo kule nkalo. Sele siyazi yonke malunga nayo.
2 IPredator Triton 500 ngoku iyafumaneka
3 Ixabiso kunye nokuqaliswa
Le Predator Triton 300 yeyona modeli intsha kuluhlu lweTriton, enayo Windows 10 njengenkqubo yokusebenza kwayo. Yimodeli eyaziyo ukudibanisa ngokugqibeleleyo ukusebenza kunye nokusebenza kunye ne zincinci, zinomdla kwaye zinomtsalane uyilo. Inobunzima nje nge-2.3 kg, eyenza ikhaphukhaphu ngakumbi xa ithelekiswa nezinye iimodeli zentengiso namhlanje. Njengokwesiko kolu luhlu, kuza kugqitywe umbala omnyama omnyama ngee-accents eziluhlaza kunye nokukhanya.
Iscreen sale laptop ye-Acer yokudlala inesayizi ye-intshi ye-15,6. Sisikrini esine-HD epheleleyo, esenziwe ngepaneli ye-IPS. Isinika inqanaba lokuhlaziya le-144 Hz kunye nexesha lokuphendula le-3 ms, ukuze sizokufumana awona mava mahle xa sidlala nayo.
Le modeli isebenzisa ifayile ye Isizukulwana se-7 se-Intel Core i9 processor ngaphakathi, edityaniswe nge-NVIDIA GeForce GTX 1650 GPU kunye ne-16GB ye-4Hz imemori ye-DDR2666 (iyandiswa ibe yi-32GB). Ukuze abasebenzisi babe nendawo yokugcina ephezulu ekhoyo kuyo, i-Acer iyangqina ukuba le Predator Triton 300 ibonelela ngenkxaso ukuya kuthi ga kwi-1 TB PCIe NVMe SSDs kwiRAID 0 ukuya kuthi ga kwi-2 TB hard drive. Kwakhona, kuqinisekisiwe ukuba i-Killer Wi-Fi 6 AX 1650 idityanisiwe kunye ne-Killer Ethernet kuyo.
Ukulalela, inkampani isebenzise iiWave Nx. Kwelinye icala, Ikhibhodi yeLaptop ineempawu zeRGB ziindawo kunye nezitshixo zeTurbo kunye nePredator Sense, izinto ezimbini ezibalulekileyo kwiincwadana zemidlalo namhlanje. I-brand iye yafuna ukugcina uyilo oluphezulu lwe-thermal olufumaneka kuzo zonke iilaptops ezikuluhlu lwePredator. Oku kubandakanya abalandeli ababini nge-Acer's 3th generation AeroBlade 4D technology fan technology, itekhnoloji yeCoolBoost, kunye nobuchule bokubekwa kokungenisa umoya kunye nokukhupha iives.
IPredator Triton 500 ngoku iyafumaneka
Le Predator Triton 300 ayisiyiyo kuphela inoveli kolu luhlu. I-Acer ikwazisile kulo msitho e-IFA 2019 i-Predator Triton 500, enye imodeli kolu luhlu lweelaptops zemidlalo. Inikwe enye imodeli enamandla, inentsebenzo elungileyo, kodwa ilula kwaye ibhityile. Kule meko ingama-17,9mm ubukhulu kuphela kwaye ubunzima bayo yi-2.1 kg. Kwenza ukuthuthwa kwakho kube lula ngalo lonke ixesha.
Le modeli yeAcer inescreen esihlaziyiweyo. Isebenzisa isikrini se-HD esigcweleyo esingu-15,6-intshi, eneqhosha elimangalisayo lokuhlaziya i-300Hz.Yenzelwe nge-chassis yesinyithi sonke enee-bezels ezimxinwa ze-6,3mm ukuhambisa umyinge we-81% we-chassis-to-screen ratio. Kwiprosesa, isebenzisa isizukulwane se-7 se-Intel Core i9, ukuze isinike amandla amakhulu ngalo lonke ixesha, siyivumele ukuba ibe lilaptop yokudlala enamandla.
I-Acer iqinisekisile ukuba ezi laptops zimbini zintsha ziya kuthengiswa oku kuwela ngokusemthethweni kwihlabathi liphela. Kwabo banomdla wokuthenga iPredator Triton 300, kuye kwabhengezwa ukuba izakufumaneka ukusuka ngo-Okthobha ngexabiso le-1.299 euro. Kwelinye icala, abo bafuna ukuthenga i-Acer Predator Triton 500 kuya kufuneka balinde de kube ngu-Novemba, xa izakufika ngexabiso le-2.699 euros
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » IPredator Triton 300: Ilaptop entsha yokudlala yeAcer
I-Acer ihlaziya uluhlu lwayo lweencwadana zeencwadana ze-ultrathin Swift
I-Acer iveza uluhlu lwayo lweencwadana zeencwadana zeChannelbook kwi-IFA 2019